Black tourmaline - Macdanta macdanta 'boron crystalline' - fiidiyow
Tags madow, Tourmaline madow, Tourmaline
Macnaha macdanta dhagaxa ah ee loo yaqaan 'tourmaline crystal Stone crystal'.
Iibso dukaameeyaha madow ee dabiiciga ah ee dukaannada ah
Black tourmaline waa macdan macdanta 'boron silicate'. Qaar ka mid ah walxaha raadraaca waa aluminium, bir, sidoo kale magnesium, sodium, lithium, ama potassium. Tourmaline waxaa lagu sifeeyay inuu yahay dhagax qaali ah oo qaali ah, dhagaxa qaaliga ahi wuxuu ku yimaadaa midabbo badan oo kala duwan. Sida laga soo xigtay Madras Tamil Lexicon, magacu wuxuu ka yimid ereyga Sinhalese "thoramalli", koox ka mid ah dhagxaanta dhagxaanta laga helay Sri Lanka. Sida laga soo xigtay isla ilo, Tamil "tuvara-malli" waxay ka timaadaa ereyga asalka ah ee Sinhalese. Etymology-ga sidoo kale wuxuu ka yimaadaa qaamuusyada kale ee caadiga ah oo ay ku jiraan Qaamuuska Ingiriisiga ee Oxford.
Taariikhda tourmaline madow
Midab dhalaalaya oo dhalaalaya Sri Lankan dalxiis dalxiis ayaa la keenay Yurub. Tiro aad u tiro badan ayay Shirkadda Dutch East India Company. Si loo qanciyo baahida loo qabo xiisaha iyo jawharad. Waqtigaas, ma aanan ogeyn in schorl iyo sidoo kale tourmaline ay yihiin macdan isku mid ah. Waxay ahayd kaliya qiyaastii 1703 in la ogaaday in qaar ka mid ah dhagaxyada midabbada leh aysan ahayn zircons. Tourmaline waxaa mararka qaar loogu yeeri jiray 'Ceylonese Magnet', maxaa yeelay way soo jiidan kartaa ka dibna dib u celin kartaa dambas kulul sababo la xiriira astaamaha pyroelectric.
Tourmalines tiknoolajiyada hodanka ah
Tourmaline wuxuu leeyahay noocyo kala duwan. Caadi ahaan, dalxiisayaasha taajirta leh ee madow waxay madow yihiin buluug-madow si bunal qoto dheer leh, halka noocyada magnesium-taajka ah ay yihiin bunni, caleemaha lithium-ga waxay ku dhow yihiin midab kasta: buluug, cagaar, casaan, jaalle, casaan, iwm. waa mid aan midab lahayn. Cabbirrada midabada leh iyo midabada badan ayaa caadi ah, oo ka tarjumaya kala duwanaanta kiimikada dareeraha ah inta lagu jiro qalabixinta. Crystals waxay noqon kartaa mid cagaar ah oo midba midka kale ah iyo sidoo kale casaan. Ama cagaar dusha iyo casaan gudaha. Noocani waa dalxiis oo qarxa. Noocyada dalxiisayaasha qaarkood waa diikroik, marka ay badalayaan midabka marka laga eego jihooyinka kala duwan.
Macnaha dhagaxa madow ee tourmaline dhagaxa macnaha iyo bogsiinta faa'iidooyinka guryaha
Black tourmaline waxaa loo isticmaali karaa in lagu celiyo labadaba lagana ilaaliyo diidmada. Way ku fiican tahay leexinta tamarta shucaaca. Waxay kor u qaadeysaa kuwa jir ahaan fayoobaanta iyadoo la siinayo koror ku yimaada firfircoonaanta jirka, xasilloonida shucuurta, iyo garashada garashada.
Muxuu u fiican yahay tourmaline madow?
Mid ka mid ah aasaaska ugu awoodda badan, nadiifinta, iyo dhagaxyada ilaalinta. Ka jooji diidmada, ilaali dhammaan heerarka. Dhagaxan wuxuu si gaar ah waxtar ugu leeyahay dadka la kulma heerar sare oo walaac ah meelkasta oo noloshooda ah.
Ayaa xiran kara tourmaline madow?
Dhalada ayaa qof walba xidhan karo. Waxaa badanaa xiran kara koritaanka Libra iyo Capricorn. Waxa kale oo lagu hayn karaa meelaha aad ku nooshahay sida guri ama goobtaada shaqada maadaama ay nuugayso taban.
Xagee dhigtaa tourmaline madow?
Nadiifinta iyo ilaalinta, dhagaxu wuxuu kufiican yahay albaabka laga galo gurigaaga. Dhig konsoliska, daaqadda ama khaanadda albaabka agtiisa. Kudar gabal jaad ah si aad ugu soo dhaweyso xoolo iyo nasiib wacan.
Sidee u isticmaashaa madow tourmaline ilaalinta?
Dhig Crystal-ka u dhow sariirtaada ama geeska qolkiisa, si aad u ballaariso adiga iyo booskaaga. Ku sii qaado jeebkaaga si aad u hesho badbaado dheeraad ah inta aad ku sugan tahay dadweynaha ama shaqada. Xidho dahabka dhagaxan ku yaal, sida jijin ama silsilad.
Miyaad xiran kartaa tourmaline madow maalin kasta?
Qiimeyn udhaxeysa 7 iyo 7.5 oo ku saabsan miisaanka Mohs ee adkaanta macdanta, dahabka qurxinta 'tourmaline' waa la gashan karaa maalin kasta, laakiin si taxaddar leh. Hilqado iyo suumanka had iyo jeer waa ikhtiyaarro ammaan ah haddii aad rabto inaad xirato qurxinta tourmaline maalin kasta.
Ku iibso tourmaline madow dabiiciga ah dukaankeenna qaaliga ah
Xiddigta madow ee moonstone
Tags madow, Xiddig madow, Moonstone, xiddiga